Akucaci ngezikhalo zabafundi base-TVET | News24
Akucaci ngezikhalo zabafundi base-TVET
NAKUBA zingakabuyi zonke izimpendulo zabafundi basekolishi elise Mgungundlovu iTechnical Vocational Education and Training (TVET) esigcemeni i-Midlands, abafundi bakuleli kolishi bathi banethemba lokuthi kukhona ushintsho oluzokwenzeka.
Lokhu kulandela emva kokuba bemashele emahhovisi amakhulu akuleli kolishi (Central Office) ngomhla ka-28 kuNhlolanja (February) nalapho behambise khona uhlu lwezikhalo zabo.
Phakathi kwezinye zezikhalo laba bafundi babeke ukuthi abakaze bayithole imali yokugibela ekumele engabe banikezwa yona selokhu kwaqala isigamu sokufunda (semester), ukungabikho esimweni esihle kwezindawo zokuhlala, ukungavulwa kwamagumbi ama-computer uma befuna ukwenza umsebenzi wesikole kanjalo namawindi angavuleki negceke eligcwele imigodi.
UMengameli wesigungu esimele abafundi (SRC) kuleli kolishi uMnuz Velenkosini Shandu uthe zikhona izimpendulo abazitholile eziphuma kubaphathi baleli kolishi mayelana nezikhalo zabo kodwa abagculisekile.
“Ohlwini lwethu lwezikhalo sathi sifuna okungenani baphendule u-45% wazo zingakapheli izinsuku eziyi-7 kodwa baphendule u-30%.
“Basitshele ukuthi igumbi lama-computer selizovuleleka kubona bonke abafundi abafuna ukulisebenzisa, bathi nezinkundla zemidlalo zizovuleleka njalo ngoLwesihlanu kulabo bafundi abenza ezemidlalo.
“Indaba yezimali yona basitshela ukuthi asilinde kuze kuphele inyanga kaNdasa (March) nabathi yilapho sizoqala khona ukuthola imiyalezo ephuma ka-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS), nokuyinto esiyibona iyisethembiso esingekho.
“Akukho ngisho into eyodwa esinika isiqinisekiso sokuthi lokhu kuzokwenzeka.
“Abafundi basazoqhubeka babhekane nenkinga yokungabi nayo imali yokugibela yonke le nyanga belinde into abangayazi abangazi nokuthi izolunga yini,” kusho yena.
UMnuz Shandu uthe njengabaholi babafundi basazoqhubeka bebe nezingxoxo nabaphathi ukuze bezozama ukuxazulula izinkinga ababhekene nazo njengabafundi.
“Asijabulile neze ngalezi zimpendulo abasinikeze zona ngoba izikhalazo zethu ebezihamba phambili bekuyinkinga yezimali kanye nezindawo zokuhlala.
“Sizohlangana nabaphathi zonke izinsuku uma kufanele, ngoba ithemba labafundi likuthina kanti nathi sifuna basethembe,” kubeka yena.
Okwamanje ukufunda kusaqhubeka njengenjwayelo kuleli kolishi.